စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ 100 အခမဲ့လှည့်ဖျား Starburst |
ဒီဆုကြေးငွေအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00.01 ကြာသပတေးနေ့ 25 သြဂုတ်လနှင့် 23.59 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 31 သြဂုတ်လ 2016 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမားမြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းငွေသွင်းခြင်းနှင့် Starburst အပေါ်အာမခံရပါမည်.
ထိုမြှင့်တင်ရေးကာလအတွက်£မှ 50 အထိကစားသမားသိုက်သူတို့လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည် အကယ်. 100 အခမဲ့ Starburst ပေါ်မှာကစားရန် spins.
ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးခံရလိမ့်မည် 100 Starburst အပေါ်တစ်နေ့လျှင်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ